China desk-top feeder ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | Baiyi
စံပြ BY-TF01-300 / BY-TF02-400 / BY-TF04-400
အသွင်အပြင်:သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူ။ သက်ရောက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်မြင့်ပြီးလည်ပတ်မှုလွယ်ကူသည်။ စက္ကူ၊ တံဆိပ်၊ စက္ကူသေတ္တာ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်စသည်တို့အတွက်ဝတ်စုံ။ TIJ ပရင်တာ၊ CIJ ပရင်တာစသည်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်။ ရနိုင်သည်။ စာသား၊
စီးရီးစားပွဲခုံအစာကျွေးခြင်းသည်ထုတ်ကုန်ကျွေးမွေးမှုကိုနားလည်ရန်ပွတ်တိုက်အားနိယာမကိုကျင့်သုံးသည်။ ၎င်းသည် Desktop ဒီဇိုင်းနှင့်နေရာသေးငယ်စေရန်အတွက်သင့်တော်သည်။ မြင့်မားသောဤသုံး function ကို modulars: ပွတ်တိုက်ထုတ်ကုန်နို့တိုက်ကျွေးရေး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း။ ပစ္စုပ္ပန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောစားပွဲခုံအစာကျွေးခြင်းသုံးမျိုးရှိသည် - ၁၊ စားပွဲခုံ - ပွတ်တိုက်အားဖြည့် (၁: BY-TF01-400) ။ စားပွဲတင် - ထိပ်တန်း baffle အမျိုးအစားလမ်းခွဲ (မော်ဒယ်: BY-TF04-300);3။ အသိဉာဏ်စားပွဲခုံထိပ်တန်းပွတ်တိုက်အားလမ်းခွဲ (မော်ဒယ်： BY-TF02-400) ။
၁။“ desktop friction feeder” သည်စက်ကိုယ်ထည်တစ်ခုလုံးအတွက်သံမဏိကိုအသုံးပြုသည်။ ပွတ်တိုက်အားအားဖြည့်ပေးသည့်စွမ်းအင်အဖြစ်ပွတ်တိုက်အားပေးသောခါးပတ်သည်မြင့်မားသောပွတ်တိုက်အားခါးပတ်နှင့်ကိုက်ညီသောပွတ်တိုက်အားဖိအားပေးသည့်ခါးပတ်ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုမှုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ပလတ်စတစ်အိတ်အမျိုးမျိုးအတွက်အထူးသင့်လျော်သည်။ ပါးလွှာသောထုတ်ကုန်သည် ၀.၀၂ မီလီမီတာရှိသည်။ က cantilever ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူရှိ၏, တင်နှင့်ဝတ်ဆင်ခါးပတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အလွန်အဆင်ပြေသည်။
၂။ "desktop baffle type feeder" သည် "baffle separation" ဟူသောနိယာမကိုလက်ခံသည်။ တစ်ခုတည်းသောပွတ်တိုက်အားဖြည့်သည့်အစာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် "ထူသော၊ ခဲယဉ်း။ လေးလံသော" စက္ကူသေတ္တာ၊ ကဒ်ပြားများနှင့်ပန်းကန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီစေသည့်ပွတ်တိုက်အားဖိအားပေးခြင်းမရှိပါ။ တစ်ချိန်တည်းတွင်ခါးပတ်အားဝတ်နိုင်သောအနိမ့်ဆုံးမှာပွတ်တိုက်အားတည်ငြိမ်ပြီးထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသောကြောင့်အစာကျွေးခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တည်ငြိမ်ပြီးမြန်ဆန်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ပလတ်စတစ်အိတ်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်တော်သောပွတ်တိုက်အားဖိအားပေးသည့်ခါးပတ်ကိုတပ်ဆင်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ခါးပတ်နှစ်ခုသည်compatibleုံသဟဇာတဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အကျယ်ဆုံးလျှောက်လွှာအကွာအဝေး၊ အရွယ်အစားသေးငယ်။ အလေးချိန်ရှိသောအလင်း၊ အမြန်နှုန်းနှင့်အခိုင်မာဆုံးသောပစ္စည်းကိုအသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များအတွက်အများဆုံးအထူ 10mm နိုင်ပါတယ်။
၃။ "အသိဉာဏ်ရှိသောစားပွဲဝိုင်းထိပ်ဖျားကျားကန်ခြင်း" သည်စားပွဲခုံနှင့်မတူပဲကွဲပြားခြားနားသောပွတ်တိုက်အားခါးပတ်အား သုံး၍ သုံးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖြည့်တင်းခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ စားပွဲခုံနှင့်ပွတ်တိုက်ဖိအားပေးသည့်ခါးပတ် modular တပ်ဆင်ထားသည်။ ဤအချက်ကြောင့် feeder ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ လည်ပတ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအတွေ့အကြုံများကိုများစွာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်အကျယ် 25mm မှ 400mm အထိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပွတ်တိုက်အားဖိအားပေးသောခါးပတ် modular သည်လွတ်လပ်သောမိုက်ခရိုမီတာညှိနှိုင်းမှုဖြင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်အဆင်ပြေသည်၊
2. စားပွဲခုံ - ထိပ်မှာ baffle-type ကိုလမ်းခွဲပုံ
3. အသိဉာဏ်စားပွဲခုံ - ထိပ်တန်းပွတ်တိုက် feeder
1. စားပွဲပေါ်မှာ - ထိပ်တန်းပွတ်တိုက် feeder parameter သည်
အေအရွယ်အစား: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (conveyor belt width 400mm)
Power စွမ်းအင် - 500W ခန့်
အီးထိရောက်မှု: 0-300pcs / min (ကိုးကားဘို့ 100mm ထုတ်ကုန်ယူ)
အက်ဖ်ခါးပတ်အလုပ်လုပ်နှုန်း: 0-60m / min (ချိန်ညှိ)
G. အရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-400) * (80-380) * (0.05-3) mm
အိပ်ချ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless DC ကမြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု
ဗြဲမော်တာ: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless, DC မော်တာ။
J. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန် - စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်များ၊ ကတ်များ၊ တံဆိပ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
K. စက်ကိုယ်ထည်: သံမဏိ
အယ်လ်တပ်ဆင်နည်း - လွတ်လပ်သောတပ်ဆင်ခြင်း၊
အမ် optional function ကို: လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူပန်ကာ, အလိုအလျောက်စုဆောင်းခြင်း, အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခံရ။
2. စားပွဲခုံ - ထိပ်မှာ baffle-type ကို feeder parameter သည်
အေရှုထောင့်: L * W * H = 1300 * 635 * 150mm (conveyor belt width 300mm)
အီးထိရောက်မှု: ၀-၃၀၀pcs / min (ဥပမာ ၁၀၀ မီလီမီတာအရွယ်အစားကိုယူပါ။ )
အက်ဖ်ခါးပတ်အလုပ်လုပ်နှုန်း: 0-60m / min (အစဉ်မပြတ်ချိန်ညှိ)
G. အရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-300) * (60-280) * (0.1-3) mm
အိပ်ချ်မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနည်းလမ်း: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless DC ကမြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု။
ဗြဲမော်တာ: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless, DC မော်တာ
J. ရရှိနိုင်သောထုတ်ကုန် - စက္ကူ၊ ပလတ်စတစ်အိတ်များ၊ ကတ်များ၊ တံဆိပ်စသည်တို့ဖြစ်သည်။
N. optional function ကို: လေဟာနယ်စုတ်ယူခြင်း၏ပရိသတ်များ, Auto- စုဆောင်းခြင်း, အလိုအလျောက်ငြင်းပယ်ခံရ။
3. အသိဉာဏ်စားပွဲခုံ - ထိပ်တန်းလမ်းခွဲ
အေရှုထောင့်: L * W * H = 1700 * 760 * 210mm (Conveyor belt width 400mm)
F> ခါးပတ်အလုပ်လုပ်နှုန်း: 0-60m / min （（စဉ်ဆက်မပြတ်ညှိနှိုင်းခြင်း）
G. အရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: L * W * H = (60-400) * (30-380) * (0.05-3) mm
အိပ်ချ်မြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှုနည်းလမ်း: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless DC ကမြန်နှုန်းညှိနှိုင်းမှု။
ဗြဲမော်တာ: ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ် brushless DC ကမော်တာ
J. ရရှိနိုင်သည့်ထုတ်ကုန် - စက္ကူ၊ ပလပ်စတစ်အိတ်များ၊ ကတ်များ၊
K. စက်ကိုယ်ထည်: သံမဏိ။
နောက်တစ်ခု: Feeding & TTO အပူပုံနှိပ်ခြင်းတစ်ခုလုံး